Mahamasina sy ny manodidina : lehilahy dimy voasambotra nanapoaka grenady lakrimozena | NewsMada
Mahamasina sy ny manodidina : lehilahy dimy voasambotra nanapoaka grenady lakrimozena
Par Taratra sur 27/06/2016
Miparitaka ny grenady! Olona dimy indray voasambotry ny mpitandro filaminana teny Mahamasina sy ny manodidina, omaly nandritra ny matso teny amin’ny kianjan’i Mahamasina. Roa nahatrarana grenady lakrimozena raha nanimpy cocktail molotov kosa ny telo…
Saika hanakorontana ? Olona dimy voasambotry ny mpitandro filaminana, omaly teny Anosy sy Mahamasina,voarohirohy ho nikasa hanakorontana nandritra ny matso lehibe teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina.
Araka ny fanazavan’ny lehibe misahana ny angom-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Rakotoarison Anthony, olona iray nahatrarana grenady lacrymogène nandritra ny fisavana teo amin’ny vavahady miditra ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly maraina, araka ny tatitra voarainy tamin’ireo mpitandro filaminana nanao ny fisavana. Olona iray hafa koa nanapoaka grenady lacrymogène teny Anosy izay voalaza fa olona adaladala ity nitondra grenady ity. Tsy fantatra kosa anefa na mody adala ity olona tratra teny Anosy ity. Nandritra ny fisavana ireo olona mampiahiahy teny ivelan’ny kianjan’i Mahamasina no nahatrarana azy, raha ny fanazavana hatrany. Nilaza kosa anefa ilay tratra teo Mahamasina fa tsy azy ilay grenady tratra tany aminy fa hoe nirahina fotsiny izy. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana momba ity fitaovam-piadiana tratra ity rahateo ny zandary ka ho fantatra aorian’izany ny marina rehetra.
Fa nisy olona telo hafa koa voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy etsy Mahamasina, omaly maraina. Voarohirohy ho nanipy cocktail molotov teo amin’ny zaridainan’ny farihin’Anosy izy telo lahy ireto. Voalaza fa nikasa hanakorontana ry zalahy ireto satria nanararaotra ny fahamaroan’ireo olona handeha hijery ny matso ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Mitohy ny fanadihadiana!
Fiara efatra koa indray simba teny akaikin’ny lapan’ny Antenimierandoholona vokatry ny fipoahana nitranga teo akaikin’ny vavahady. Voalazan’ireo mpiambina ao amin’ny lapa fa nisy nitoraka cocktail molotov teny an-toerana, ny asabotsy tamin’ny 4 ora maraina. Tonga teny an-toerana ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava taorian’izay.
Maître de son destin 15/07/2020